ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ဖြစ်မလားရယ်လို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ဖြစ်မလားရယ်လို့ 
ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ဖြစ်မလားရယ်လို့ 
Posted by မောင် ပေ on Jul 31, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 12 comments
“ ဘာမှ အထင်ကြီးစရာ မရှိတဲ့ လောက ၊ ထွီ….သစ္စာမရှိ ၊ မေတ္တာ ကို ခုတုံးလုပ်ကြ ၊ ဒီလို အသိုင်းအဝိုင်း လောက ထဲ ၊ ငါ့သား….မဝင်စေရဘူး ၊ ငါ့ တုန်းက မိုက်လို့ ၊ မသိခဲ့လို့ဝင်ခဲ့ပြီးပြီ…။ ဒီမှာ…မင်းခ…..မင်းမှတ်ထားဖို့ က အနုပညာလောက ဆိုတာ…မင်းဘဝ နဲ့ ဘာမှ မအပ်စက်ဘူး ၊ မေ့ထားရမယ်..ဆိုတာပဲ ” ဟု အမြဲ ဆို ဆုံးမနေကြ ။
“ မင်းခ….၊ မင်းခရေ…မင်း ကူမှ ဖြစ်တော့မယ် အနေအထားတော့ ရောက်နေပြီ ကွာ ”
“ ဗျာ…ဆရာ ၊ ဘာများ ဖြစ်လို့ လဲ ဗျ ”
“ ဟာ..ဆရာကလဲ…ကျွန်တော် က မင်းသမီးနေရာ က ဆောင်ရမှာလေ..။ အခု ဒေါ်မိုး အက အတွက် မိန်းမ လို ပြင်ထားတာ ဆိုတော့ ၊ အဲဒီနေ ရာ ဝင်ရမယ့် ဆိုရင် ကျွန်တော် မိတ်ကပ် ဖျက်ပြီး တစ်ခါ ပြန်လိမ်းနေရာမှပေါ့ ”
“ ကောင်းပြီကွာ…မြန်မြန်လေး လုပ်လိုက် ၊ မင်း ရှိလို့ လည်း တို့ ကပွဲလေး က အရမ်းကို အဆင်ပြေ တော့တာပေါ့ကွာ ၊ ကျေးဇူးပါပဲ..မင်းခ ရာ ”
“ ကယ်ကြပါဦး ဗျို့ …..နေ့ ခင်းကြောင်တောင်ကြီး လုယက်နေလို့ ပါဗျို့” အော်ရင်း ရုန်းဟန်ပြသည် ။ သို့ သော် ဆေးသမား လုပ်သူ က သူ့ ပိုက်ဆံ အိတ်ကို တစ်ကယ် ဇွတ်နှိုက်လာသည် ။ မျက်နှာ ကို ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ကယ် ကို မာန်ပါပါနှင့် ။ မင်းခ လည်း စိုးရိမ်လာပြီး ဇွတ်ရုန်းသည် ။ သို့ သော် ဆေးသမား လုပ်သူ က သူ့ ထက် ဘော်ဒီ ပိုကြီး သဖြင့် မနိုင် ။ သို့ နှင့် မင်းခ တစ်ယောက် မတတ်နိုင်သည့် အဆုံး ဆေးသမား ကို ပစ်ထိုးလိုက်သည် ။ စင်အောင်မှ ပရိသတ်ကြီးက ပွဲကြသွားသည် ။ “ တစ်ကယ် သရုပ်ဆောင် တာ တော်တယ် ကွ ” ဟု ဆိုကာ ဝိုင်းဝန်း လက်ခုပ် အားပေးကြသည် ။ တစ်ကယ်တမ်း မင်းခ တစ်ယောက် မှာမူ အကျဉ်းအကြပ် ထဲ ။ မင်းခ ထိုးလိုက်သဖြင့် ဆေးသမား လုပ်သူ တစ်ချက် ယိုင်သွားသည် ။ ပြန်ဆုတ်ခွါသွားသည် ။ သို့ သော် မင်းခ ပိုက်ဆံအိတ်ကမူ သူ့ ထံ ပါသွားပြီ ။ မင်းခ လည်း “ ဟေ့ကောင်.. ငါ့ ပိုက်ဆံ အိတ် ပြန်ပေး ” ဟု ဆိုကာ ပြန်ဖက် လိုက်တော့ မင်းခ မျက်နှာကို တစ်ချက်ထိုး ၊ တွန်းလွှတ်ပြီး စင်နောက်သို့ ပြေးဝင်သွားသည် ။ မင်းခ တစ်ယောက် လည်း အော်ငိုပြီး ကန့် လန့် ကာ အမြန်ချ ရန် အော်ဟစ်လိုက်သည် ။
“ သွားပြီ….ဇါတ်တော့ ပျက်ပါပြီ ကွာ ၊ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ မင်းခ ရယ် ” ဟု ဆရာ က အပြစ်တင်လာသည် ။ မင်းခ က သူ့ ပိုက်ဆံ အိတ် ကို တစ်ကယ် လုယူ သွားကြောင်း တိုင်လိုက်သည့် အခါ ဆေးသမား လုပ်သူ က ခပ်တည်တည် နှင့် သူ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကို ပစ်ပေးပြီး “ အဖြစ်သည်း နေလိုက်တာကွာ ” ဟု ဆိုကာ ထွက်သွားသည် ။ ပိုက်ဆံ အိတ် ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ အိမ်မှ ပါလာသော ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ ခန့် အပြင် ၊ ဆုချီးမြှင့် ခံထားရသည့် ၅ထောင်ကျပ်တန် ၂ ရွက်ပါ မရှိတော့ ၊ သို့ နှင့် ဆရာ့ ကို သွားပြောတော့
“ တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ပါလား ၊ မင်းကြောင့်မို့ တို့ သရုပ်ဖော် ဇါတ်လည်း ပစ်ရပြီ….သွားစမ်းကွာ ” ဟု ဆိုကာ အကြိမ်းမောင်း ခံရသည် ။ မည်သို့ တောင်းပန် ပြောဆိုဆို ဆရာ လုပ်သူ က သူ ပြောသမျှ ကို နားမဝင်တော့ ။ ဒေါသပုန် ထနေသည် ။ နောက်ဆုံး ဘယ်လို မှ ပြောမရတော့ သဖြင့် မင်းခ တစ်ယောက် ဝမ်းနည်း ပက်လက် ပြန်ခဲ့သည် ။ အိမ်သို့ ရောက်တော့ ဖခင် ကြီး က စောစောစီးစီး ပုလင်းထောင်နေသည် ။ မျက်နှာတွင် တစ်ချက် အထိုးခံ ထားရသဖြင့် ဖူးယောင်နေသော မျက်နှာ နှင့် စိတ်ညစ်နေသည့် ပုံကို မြင်တွေ့ သွား သဖြင့် ခေါ်မေးတော့သည် ။
“ ဟေ့ကောင်….မင်းခ လာစမ်းပါဦး ၊ မင်းမျက်နှာ က ယောင်လို့ ပါလား ၊ ဘာဖြစ်လာတာ လဲ ”
“ ဟားဟားဟားဟား… ခံလာရတာ နည်းတောင် နည်းသေးတယ် ၊ ဒါ မင်းအတွက် သင်ခန်းစာ ပဲ ၊ ဒီအလုပ် တွေ မလုပ်ရပါဘူး လို့ ငါ အတန်တန် ဆုံးမနေတဲ့ ကြား က သွားကမြင်းတာလေ ၊ ဒါ အကင်းပဲ ရှိသေးတယ် ၊ တစ်ကယ့်..တစ်ကယ် ငါတို့ လောက ထဲ မှာဆိုရင် ဒီ့ထက် အဆတစ်ရာ မက ဆိုးတဲ့ ဟာတွေ အများကြီး ရှိတယ် ။ ထားပါတော့…သွားသွား ရေချိုးပြီး နားချေတော့ …။
ဝမ်းနည်း ကြေကွဲလာသော ကျောင်းသားလေး မင်းခ စိတ်တွင်တော့…………………. ။
( ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် အဖြစ် ကြိုးစားရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ်သာ ဖြစ်ပါသည် ။ )
၀တ္ထူ တို တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ် ။ ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ် ။ အလားအလာ ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်လို့မြင်မိပါတယ် ။ ဒီထက် ပို ကောင်းတဲ့စာတွေ ကို ဖန်တီးနိုင်မယ့်လက်..လို့ လည်း ယုံကြည်မိပါတယ် ။ တကယ်ပါ။ စာပေလောက မှာ ဒီ လို ရေးနိုင်စွမ်းရှိသူတွေ တကယ်လိုအပ်နေတာပါ ။
စာသမားအချင်းချင်း စာတစ်ပူဒ်နဲ့ တင် ခင်မင်မိပါပြီ။ ထပ်ရေးပါဦး။
ဤအရာသည်..၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
အစက ရုပ်ရှင်မင်းသား မရရင် ဇာတ်မင်းသားတော့ လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့ ..
ဘီယာ..၂ ခွက်နဲ့ .ဘဲကင် တစ်စိတ်.လားထားပါ..
ဒီပုံစံ အတိုင်း ဆိုရင်
ပထမ ဆု ဘဲကင် နဲ့ ဘီယာ နဲ့ က
ကိုပေါက်ဖော် အတွက် သေချာနေပြီ ။ ဟဲဟဲ
အဲဒါ နုံတာလို့ခေါ်တယ်…ဇာတ်လမ်းစထဲကပိုက်ဆံအိတ်က ငွေတွေထုတ်တားလိုက်ပါလား… ဒါဆိုသူလုသွားလည်းမင်းခ ပိုက်ဆံမဆုံးတော့ဘူးလေ….
၀တ္တုတို များများ ရေးပြီး နာမည်ရ စာရေးဆရာ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါစေ။
၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ် … အရေးအသားစွဲဆောင်မှုရှိပါတယ် … နောက်လဲ များများရေးနိုင်ပါစေ ..
ဆရာလုပ်တဲ့လူကလည်း ဆရာဖြစ်ပြီး ဘာလို့ဒီလောက်ဒေါသပုန်ထနေရတာလဲမသိဘူး
ဒေါသထွက်တာလည်းထွက်ပေ့ါ၊ တပည့်လုပ်သူက သေချာတောင်းပန်ပြီး ရှင်းပြနေရင် နားထောင်ပြီး ဖြေရှင်းသင့်ဖြေရှင်းပေးရမှာပေ့ါ
လိုအပ်တော့ မြှောက်ခိုင်းပြီး မလိုတော့မှ ကြိမ်းမောင်းတာမျိုး ဖြစ်နေသလားလို့
ဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် အဖြစ်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသွားပါသည် ။
ကောင်းပါတယ်..၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်.. အဲလိုအတွေ့အကြုံ့တွေ ပေါင်းပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အနုပညာရှင်ဘ၀၏ဖြတ်သန်းမှု ဆိုပြီး ဟာသ ၀တ္ထု တစ်အုပ်တောင်ရေးလို့ရတယ်ဗျိုး .. အားပေးတယ် ဆက်ရေး စိတ်ဝင်စားတယ် အဲဒါမျိုးတွေ
ကျွန်တော် ရေးတဲ့ ပို့ စ်မှာ တော့ ကွန်မင့် ပေးသမျှ လူတိုင်း ကို
အနီပေးထားသူ တိုင်း ကို
တတ်နိုင်သမျှ ပြန် စိမ်းပေးထားပါကြောင်း ။
အဘယ်ကြောင့် ကွန်မင့်များ ကို များကို
မိုင်းနပ်စ် လိုက်ပြနေတာလဲ ဆိုတာ
မောင်ပေ လက်ရည် တက်နေပါလား ။ MG မှာစာရေးဆရာတွေ ဆရာမတွေ အများကြီးပါလား